BORIC ACID FOR TOMATOES: DAADINTA TAMAANDHADA KA CUDURADA - DARYEELKA YAANYO
Boric acid waa walxo kondhil la'aan ah oo aan ur lahayn oo si fudud u dheregsan biyo diirran. Kiimikada waxaa loo isticmaalaa bacriminta kala duwan, maadaama ay hagaajinayso nafaqada geedo, taas oo kordhinaysa dhalidda khudradda iyo sii kordhinta sonkorta sonkorta ee xubnaha unugyada. Miraha iyo khudradda waxay u muuqdaan inay ku faafaan boron badan oo ka badan firileyda.
Boric acid sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu quudiyo dhirta kale: strawberries, qajaarka, xididdo, canab, baradhada, tufaax iyo isteroberi.
Kala saarida yaanyada leh boric acid waxay kicisaa koritaanka xididka iyo afkoda, fahamsan suurtagalnimada cudurrada dhirta. Waqtiga xaadirka ah, leh tiro badan oo Bacriminta kala duwan, waxaan hilmaamin karnaa cuntooyinka sahlan oo wax ku ool ah. Boron wuxuu caadiyan ka dhigayaa soo saarista maaddooyinka dhirta, waxay kicisaa habka dheef-shiid kiimikaaduna kordho saamiga chlorophyll. Sidaa darteed, baadiyaha beeray waa mid u adkaysata xaaladaha aan fiicnayn.
Ma taqaanaa? FKadib Dagaalkii Dunida Kadib, hooyooyinka dhalinyaradu waxay inta badan iibsadeen budo boron, sababtoo ah waqtigaa daaweynta maqaarka iyo maqaarka ilmaha, iyo sidoo kale hooyooyinka ibta, ayaa loo arkaa dhaqan dhaqameed maalin walba.
Qodobbada waxtarka leh ee boric acid marka koraya yaanyada
Bannaanka waaya-aragnimada leh waxay ogtahay in yaanyada ay yihiin khudaar aan u baahnayn nafaqo dheeraad ah haddii ay si sax ah uga beeraan bilowgii hore. Si kastaba ha ahaatee, xitaa bacriminta mar walba ma suurtagal in la hubiyo jiritaanka boron ee ciidda. Boron for yaanyada waa qayb muhiim ah ee horumarinta duurka, si sax ah sababtoo ah la'aanta qaybtan this si weyn u saameeyaa horumarinta warshadaha.
Bor marka hore wuxuu xoojiyaa ubaxiyo sidoo kale ma ogolaanayo miraha si ay u jimciyaan qiyaasta sare ee qoyaan. Markaad isticmaasho daroogada, dhaliddu waxay kordhin doontaa 20%, iyo dhadhanka yaanyada ayaa sidoo kale kordhin doona.
Mashiinka Boric acid ee tamaandhada waxay kor u qaadaan nuugista ka fiican ee macdanta iyo walxaha dabiiciga ah. By habka, daqiiqad waa mid aad u muhiim ah haddii aad u koraan yaanyo on balakoonka gurigaaga. Qoryaha gurigu waa mid xasaasi ah, sidaa darteedna wuxuu u baahan yahay awood dheeraad ah.
Marka looxa shaqeeyo yaanyada leh boric acid, halista infekshinka leh dabaysha goor dambe ayaa la dhimayaa. Tamaandhada ayaa loo baahan yahay in la shaqeeyo marka caleemaha ay bilaabaan inay isku xoqdo ama dhacaan. Bannaanka xirfadlayda badan oo ku qoyi miraha ka hor beerashada.
Ma taqaanaa? Boronku wuxuu ku jiraa heerka ugu hooseeya khatarta. Taasi waa, maaddada hoos u dhacda maqaarka qofku ma keeno gubasho. Si kastaba ha noqotee, asiidhku si tartiib tartiib ah ayey u ururaan jirka, maadaama dabiici ahaan si tartiib tartiib ah u dhuftey.
Waxaa jira tilmaamo badan oo yaanyo ah ma leh boron ku filan: deformation iyo cirridka caleemaha, dhimashada caleemaha sare, ubax daciif ah.
Sida loo kariyo quudinta iyadoo la isticmaalayo boric acid adiga ayaa sameeya
Dharka ugu sarreeya ee leh saameyn xun oo dibadda ah waxay badbaadisaa tirada ugxan-sidaha, sameynta goobaha dhirta cusub ee loogu talagalay afkoda. Sidaas, boron ma oggola in dhirta ay u dhintaan, waxay xoojisaa adkeysiga xaaladaha qalalan iyo dhaxan.
Wixii koritaanka degdeg ah ee dalagga, waxaa lagula talinayaa in wax yar ku qoyn miraha ee acid. Wixii soo goynaya, waxaad u baahan tahay litir biyo diirran oo ah 0.2 grams oo ah acid. Isku dariddu waa maalin lakordhiyo, iyo in miraha aan dib loo dhigin, waxay ku jiraan boorso gaar ah oo loo diyaariyey faashad.
Sidee loo diyaariyaa boron for foliar codsiga iyo buufinta? Jawaabtu waa sahlan: isku dar 10 g oo walax leh 10 litir oo biyo ah. Xasuuso in walaxku aanu ku milmin biyo qabow. Xalka waxaa lagu buufin karaa ciidda laftiisa, laakiin habka ayaa dhacaya mar 3dii sanoba mar. Dharka ugu sarreeya marwalba waa la sameeyaa, inta badanna ubaxyada dhirta. Bacriminta ayaa gubi kara xididada, sababtoo ah baadiyaha ayaa horay loo waraabiyey.
Waa muhiim! Samee geedkan boric acid, hubi inaad cabbirto qiyaasta. Ka dib oo dhan, xitaa khalad yar ayaa dhaawici kara geedka iyo adiga.
Waqti goynta tomato
Arrinta qashinka waxaa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa jira hab lagu yareeyo yaanyada, loona isticmaalo muddo dheer ka hor beerashada abuurka. Hawlaha waxay ka dhacdaa laba marxaladood: miraha waxaa lagu qoyay hal maalin maalin walax, ka dib marka loo eego jaantuska lagu tilmaamay tilmaamaha; Maalintii la beerto, geeddi-socodka waa la soo noqnoqonayaa, iyo asiidhuna waxaa lagu daraa godka seedling.
Habka foliar waxaa loo isticmaalaa warshad leh miraha yaanyada. Si aad u ilaaliso khudradda daawada phytophthora, waxaad u baahan tahay inaad bilowdid inaad sameysid xilliga xagaaga. Cagaariska Boric ee yaanyada waxay horumarisaa warshad, iyo buufinta tooska ah, marka loo eego, waxay qaadataa saddex marxaladood: duurka waxaa lagu daaweeyaa isku dhafka manganese; toddoba cisho ka dib, boron waxaa loo isticmaalaa qiyaasta 1 qaado oo ah 10 litir oo biyo diirran ah; toddoba maalmood ka dib, baadiyaha waxaa lagu daaweeyaa iodine. Sidaas geedka waxaa loo ilaaliyaa xagaaga oo idil.
Boric acid for yaanyada: sida loo sameeyo
Sida la ogyahay, yaraanta boronku waxay saamaysaa waxsoosaarkii dalagga, maaddaama qaar ka mid ah miraha ay u dhintaan sababtoo ah maqaarka la'aanta. Waa muhiim in la fahmo goorta iyo sida loo xoqdo yaanyada boric acid. Hawlgalka waxaa lagu fuliyaa marxaladaha hore ee horumarinta duurka iyo ka hor bilowga ubax (iyo inta lagu jiro) ma ku celin.
Boric acid waxaa si weyn loo isticmaalaa dagaalka ka dhanka ah geesiyaal, quraanjada beerta iyo in lagu koriyo ah.
Dharka ugu sarreeya waxaa lagu sameeyaa muuqaalka muuqaalka ugxan-yare ee dhirta. Bacrimin la dhammaystiray waxaa lagu iibsaday dukaamo khaas ah ama diyaar u ah madaxbannaanida. Ka fikir sida loo hirgeliyo yaanyada boric acid. Si taas loo sameeyo, waxaa lagula talinayaa in la qaato 1 g oo ah walax, oo isku qasan 1 litir oo biyo kulul ah. Markaas geedka waxaa lagu buufiyaa dhalada buufin.
Xalka isku mid ayaa loo adeegsadaa si loogu waraabiyo dhirta xididada, laakiin ku buufinta caleemaha waxay noqon doontaa mid tayo badan. Intaa waxaa dheer, dhar xididdadu waxay keenaysaa gubasho nidaamka xididka, taas oo macnaheedu yahay in aad u baahan tahay inaad waraabiso warshad biyo leh fudud ka hor inta aadan bacarin.
Talooyin ku saabsan isticmaalka boric acid si bacrimiya yaanyada
Inta lagu jiro tijaabada yaanyo ee walax, waa lagama maarmaan in la raaco qaar ka mid ah xeerarka:
Ha ku buufin dhirta leh xal qabow. Qaado sida caadiga ah: heerkulka biyaha waa inuu la mid yahay heerkulka carrada.
Wixii dharka foliar, heerkulka hawada ee heerkulku waa 20-25 digrii oo qoyaan badan. Haddii heerka uu kordho oo qoyaanku hoos u dhaco, xalku wuu qallajiyaa oo ma bixinayaa natiijada la rabay.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la qaadin habka daaweynta, waa inaad isku daydaa xalka hal warshad, iyo ka dib markaad bilowdo inaad xoqdo dhammaan beeritaanka.
Si habboon u qadarin daawooyinka, maadaama la iska indho tiray sharciyadu waxay keeni karaan gubashada geedka iyo dhimashadiisa.
Ma aha wax la yaab leh in ay jirto weedho caan ah oo ka dhex jirta dadka: "Taasi waa wax aad u weyn maahan." Isticmaalka saxda ah ee boric acid ayaa bixin doona goosashada qani ku ah iyo miro dhadhan fiican leh dhammaadka bisha ugu horreysa ee xagaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daryeelka yaanyo 2019